[IFirefox OS] ILoqui IM isivele inokwesekwa kweWhatsApp | Kusuka kuLinux
[IFirefox OS] ILoqui IM isivele inokwesekwa kweWhatsApp
Ngingene IFirefoxOS futhi ngikholelwa ukuthi impumelelo yalesi Sistimu Yokusebenza yeselula izoncika kwikhwalithi yezicelo zayo (kanye nohlelo ngokwalo, kunjalo).
Enye yezicelo ezinhle kakhulu esingazithola kufayela le- I-MarketPlace de I-Mozilla kunjalo ILoqui IM, iklayenti lezinqubo ezahlukahlukene zokuthumela imiyalezo, Open Source futhi lokho kusekela:
I-XMPP / Jabber imvamisa
Futhi ngisanda kuthola ukuthi ngiyabonga IMozilla yaseSpain, esivele isekelwa i- WhatsApp. Ngokuvumelana ne isitatimende sephephandaba, ILoqui IM izoxhuma ngqo kumaseva we WhatsApp ngokusebenzisa amasokhethi e-TCP futhi ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lomlamuli noma ummeleli, ezahlukanisa lona kwezinye izicelo zohlelo I-MarketPlace abanikela ngale nsizakalo.
U-Adán Sánchez de Pedro, unjiniyela omkhulu weLoqui uyanezela:
Ku-WhatsApp ngeke bakwazi ukuhlukanisa uhlelo lwethu lokusebenza kusuka kolwangempela nganoma iyiphi indlela, ngakho-ke abakwazi ukuvimba abasebenzisi abangaxhumi kusuka kuhlelo lwabo lokusebenza
Akulutho, ukuthi abafana be Ukuxhumana kwe-Waalt Basebenza ukwenza uhlelo lwabo lokusebenza lube ngcono kunalokho ekwenzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » [IFirefox OS] ILoqui IM isivele inokwesekwa kweWhatsApp
Ifana nePidgin, kepha yeFirefox OS. Noma kunjalo, isiphakamiso esihle.
i-pidgin kufanele idluliselwe kuzingxenyekazi zeselula i-watsapp is crap
Uma wazi ukuthi ungaziphatha kanjani izivumelwano zeJabber, lapho-ke awudingi i-WhatsApp.
Kuyathakazelisa ukuthi manje njengoba bezokhipha i-WhatsApp yeFirefox OS bayakwenza lokhu, kepha hhe, wamukelekile.
Ngaphansi kosuku olwedlule i- "Wassap" futhi manje uLoqui naye uyasayina.
Ekugcineni, kude nokulahleka, kuzoba namakhasimende amaningi we-WhatsApp ^^
Njengoba uyilayishe kimi, ayifaki ikhodi yami ethi verifying futhi ezezimali azikaze zikuqinisekise
Ngeke, bheka » http://mundofirefoxos.blogspot.mx/2013/11/whatsapp-no-llegara-firefoxos.html#more
Kubukeka sengathi bekungukuhumusha okungalungile noma okuthize.
Labo abakuWhatsApp abanobudlabha futhi angiwathandi nhlobo amasu abo. Eqinisweni, angiyisebenzisi naphezu kokuthi cishe wonke umuntu one-smartphone uyayenza. Ngifuna bashaye iqhubu ...
Nami angiyisebenzisi. Bengicabanga ukuthi ifana neWindows Live Messenger, kepha ayisondeli naku Windows Live Messenger.
Ngamafuphi, umbuzo wezinhlelo zokusebenza.
Bengisibheke ngabomvu isikhathi lapho ilayisense yokusebenzisa mahhala ukuyithumela kohambo izophela khona. Ukuba nazo kangcono futhi mahhala, noma ngabe bangaki abantu abazisebenzisayo, angisiboni isizathu sokukukhokhela.
Kuze kube i-Tencent QQ (muva nje, inguqulo yamazwe omhlaba ifike ku-Android), kube yiklayenti lomyalezo osheshayo elihle kunazo zonke engilizamile ngemuva kwenganekwane yeWindows Live Messenger.
Kuqala bathi cha, bese kuthi yebo manje cha?
Njengoba ngikuqonda kahle ukuthi bazoyethula ekupheleni konyaka: http://mifirefoxos.com/whatsapp-para-firefox-os-llegara-antes-de-finalizar-el-ano/
Kuyadabukisa, ngoba kungaba isu elihle leFxOS, okungenani eSpain lapho ukusetshenziswa kweWhatsApp kungenakuphikiswa futhi kungujuqu ekukhetheni amatheminali amasha. Izingcingo ezineWhatsApp ezingaphansi kwama- € 100 mahhala, kungaba ngumthengisi othengisa kakhulu, ngoba abantu abaningi abanendaba ne-OS inqobo nje uma bengathumela i-WhatsApp nokufaka ku-Facebook.
Impela. Lapha eMexico ngokufanayo, into yokuqala abantu abayibuzayo lapho bethenga iselula ukuthi "unayo i-wazap?"
Ngicabanga ukuthi iMicrosoft ilishubile ithuba lokuvuselela iWindows Live Messenger kumaselula. Ngenhlanhla bonke engixhumana nabo bakhuluma bodwa engxoxweni ye-Facebook.
Kuhle, ngoba iWhatsApp ayihlelile ukuxhasa iFirefox ngandlela thile sizoba nayo.
Izindaba ezimnandi elav.
Ingabe lukhona uhlelo lwamahhala olungena kunethiwekhi ye-WhatsApp? Le kuphela?
Futhi yini oyifunayo uma isebenza?
Kukhona ne-ConnectA2, kepha ngicabanga ukuthi ayikho mahhala, yize ngingaqiniseki
I-Connecta2 iyasebenza, kepha hhayi mahhala
I-Wassap imahhala, yize i-repo yaseGithub ingaveli okwamanje, yamukelwe izolo ebusuku
Elihu ariza kusho
Kukhona futhi i-ConnectA2 nasi isixhumanisi:
Phendula u-Elihu Ariza
Imizamo emikhulu, yokuthi i-whatsapp yenze isibuyekezo nge-protocol ehlukile, noma ngedatha ehlukile ngesikhathi sokungena ngemvume, ukuqaphela uhlelo lwayo kanye ne-ADIOS Loqui.
Ukuze lokho kwenzeke, kufanele futhi kwenzeke ukuthi KONKE ukufakwa kwe-WhatsApp okukhona manje okufakwe kumafoni kuyabuyekezwa. Kodwa-ke, kuvame kakhulu ukuthi abasebenzisi bangabuyekezi inguqulo yakamuva.
Futhi noma ngabe okungenhla kwenzeka, ama-waalt asondele. Ngokuqinisekile ngeke kuthathe isikhathi eside kakhulu ukuzivuselela nazo.
Phendula ku- @ mautematico
Ngiyanibingelela bangani ... ngiyi-neophyte yeselula. Umbuzo wami ukuthi ngabe iFirefoxOS ingafakwa kunoma iyiphi i-smartphone, noma ngabe kukhona umkhawulo. Nginomuntu ohamba nge-sony eokia.
Ngokomqondo kungenziwa kuphela kumatheminali eza ne-Android ICS evela efemini.
Ngicabanga ukuthi i-Samsung galaxy Mini yami, okwamanje, kuzofanele ixhase iROM ephekiwe yeCyanogenMod 10.1.6 enokwehluleka.
Yonke iCyanogen engekho emthethweni iza nezimbungulu, into ebalulekile ukuhlala unolwazi kumabhulogi athile wesiginali onaso ngoba ahlala eshicilela ukulungisa noma anikeza izeluleko zokuthi ungazivikela kanjani. Futhi kufanele ngabe usebenzisa i-CM 7 ngoba ku-JB basebenzisa i-kernel 3 kuqhubeke futhi amanye ama-Samsung amadala anezinkinga ngayo, ikakhulukazi ngokwesikrini.
Yebo, ukwehluleka kuphela enginakho kuCyanogenMod 10.1.6 ukungabikho kwezaziso; ifoni, esikhundleni sokungazisa izingcingo, iyavala; futhi isikrini asikhiyiwe. Ngicabanga ukuthi kufanele ngifake i-CM7 kuyo noma ngipheke eyami i-CM 10.1.6 (okwamanje, sebenzisa i-kernel 2.6 ngoba angikazami ukusebenzisa i-kernel 3).
Nginayo i-cel ethengiswa yi-walmart nge-2ble chip i-inco the echo 1 Ngicabanga ukuthi isebenzisa i-Android 4.1 Umbuzo wami ungayisebenzisa i-firefox os ekuyo ??? futhi uma kungenzeka lapho ngehlisa khona i-FOS?
Nalu  ulwazi olutholakalayo lokuhlanganisa i-Firefox OS yamafoni amasha.
Ukuhlolwa okuphumelelayo kwenziwe ngohlu olwehlisiwe lwama-Smartphones, kepha ngombono kungenzeka ukukufaka kweyakho.
Vele: Kubiza okuningi kakhulu futhi "kuyingozi" kakhulu kunokupheka i-Android ROM.
Lapho ungayihlanganisa futhi uyifake efonini yakho, kungaba umqondo omuhle ukwaba ukuthi ungakwenza kanjani kwi-wiki yeMozilla. 🙂
Ngicabanga ukuthi ngeke kwenzeke kimi. Udinga ukulanda cishe i-20GB ekugcineni, ebengingakwazi ukuyenza ngisho namaviki ama-2 ..
Kuzofanele ngilinde umsebenzisi othile one-ZTE Open ukuze ahlanganise futhi alayishe i-Custom ROM ..
@elav: kungani umsebenzisi one-ZTE Open? Imiphi imishini onayo?
Nginayo, kepha ikumodi yezitini.
Ngiphinde ngibe ne-Alcatel OneTouch Fire.
NgineZTE Open American Edition. Kungani unayo eyakho kumodi yezitini? O_o
Futhi ingabe umthetho olandelwayo weWhatsApp akufanele ube yimfihlo futhi uvaliwe?
Bakwenze kanjani ukuyihlanganisa ngokushesha okukhulu kangaka kuhlelo lokusebenza naku-OS ethatha isikhathi esincane kangaka? Uma kuqhathaniswa ne-Android, alikho iklayenti lamahhala elihambisana ne-WhatsApp
Yebo kunjalo, kepha kusekelwe ku-XMPP , ekhululekile futhi evulekile, ngakho-ke kwakukhona izinkomba ezanele zokusebenzisa ubunjiniyela obubuyela emuva ukusungula i-WhatsAPI .
Ngakho-ke, ngezinkomba zeWhatsAPI kanye nobunjiniyela obuningi obubuyela emuva, bekungenzeka ukuyifaka ku-a, ake sithi, WhatsAPI.js.
 Yindaba ethokozisayo evela eminyakeni engaba mibili eyedlule, uma ngikhumbula kahle.
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi ngabe kukhona okufana ne-Android?
Omangalisayo. Konke kuhlelo lokusebenza olulodwa, ngokulondolozwa okulandelayo kwesikhala kwimemori yangaphakathi. Ingabe iyatholakala ku-Android? Noma ngabe kungokwakwaFirefox OS okwamanje?
Ngigcina ukubheka, bekunge-Firefox OS kuphela.
Kepha ekugcineni uzokwazi ukuyifaka kuFirefox ye-Android.
Ngine-alcatel one toch fire fox futhi lapho ngilanda lolu hlelo lokusebenza, kwavela amafolda ayikhulu kuphela anezinqubo eziningi, kepha uhlelo lokusebenza aluvelanga sengathi kukhona abakulahlekile ngoba uhlelo aluvuli, kuvela izinhlamvu kuphela sengathi bekuyi o2 uhlelo
kumafayili namafolda amaningi, vula eyodwa ebizwa index.html, okuyiyona eqala uhlelo lokusebenza. 🙂
Sengivele ngilande i-loqui im ​​futhi iqiniso liyangena lingene
Angikaqedi ukubhala umyalezo futhi usuhambile futhi kungena kuphela lapho ngicela ubheke leyo nkinga
Ngingene ku-loqui ngangena ku-whtsapp wangithumelela ikhodi, kodwa ngashiya ukuvula i-sms futhi angikwazi ukufaka kabusha noma ukulayisha ikhodi manje sengiyathola ukuthi ayikwazi ukuthumela i-sms. Yini okufanele ngiyenze ?
Ngifake uhlelo lokusebenza ngakhohlwa ikhodi abangithumelele yona futhi manje ayingivumeli ukuthi ngingenze engingakwenza ukuthola ikhodi
thalia castro farias kusho
Phendula uthalia castro farias
Bavimbe ukuthi ngingayisebenzisa kanjani futhi le sapp kusuka ku-firefox yami
Angikwazi ukubhalisa ku-whatsap engiyitholayo ayikwazi ukuthumela i-sms? Yini engingayenza ???
"KuWhatsApp ngeke bakwazi ukuhlukanisa uhlelo lwethu lokusebenza nolwangempela nganoma iyiphi indlela, ngakho-ke abakwazi ukuvimba abasebenzisi abangaxhumi kuhlelo lwabo lokusebenza"
Yebo, bagcina bekwenzile…: /
i-rosely manrique kusho
Okwenzekayo ukuthi angikwazi ukungena kuWhatsApp ungasiza akusikho ukuthi umyalezo ufika, bacela ikhodi abazoyifaka
Phendula ku-manrique e-rosely
Sawubona, NGINENKINGA NE-ZTE FIREFOX MOBILE YAMI.
NGINESIVUMELWANO SAMI SOKUPHILA NGESIKHATHI SOKUPHILA KWAMI, NGIYA FAKA I-OPENWHATSAPP NGANGITUMELA IKHODI EMLAYEZWENI, NGALOKHO IKHODI NGINGAKWAZI UKUKHWEBA I-WHATSAPP YAMI NGOKUQINILE, INKINGA UKUTHI BABUZA IKHODI KANYE NEKHODI ANGIKUKHUMBULE NGAYO. UNGAKUKHUMBUZI UKUTHI WENZE NENYE INOMBOLO EPHATHEKAYO NOKUTHI EMPILWENI OKUYINOMBOLO YAMI YONKE YOKUPHILA NGINGABUYELA KANJANI FUTHI IKHODI ABANGITHUMELE LAYO LINGU-4 DIGITS UKUTHI LIQHUBEKE LIQHUBEKE NE-OPENWHATSAPP LIQHUBEKE NJALO NJALO KU-WHATSAPP YAMI, NGIBONGA KAKHULU.
teodorin zarate kusho
Cha mamchen, angikwazi ukuyifaka, ngithola njalo lapho imemori khadi ingatholakali, hlola izinkulungwane zezinsuku, futhi awufuni ukuyifaka.
Phendula i-teodorin zarate
isiphambano se-belen kusho
Sawubona, uyifakile kanjani i-wapsap yami? Ngempela ayikwazi futhi ngingathanda ungisize ngicela ungisize
Phendula ku-cruz belen
Bheka, bengilokhu ngizama isikhathi eside ukulanda uhlelo lwe-whastapp ku-firefox yami evulekile ngisebenzisa i-loqui, kepha ayikwazi ukuphuma njalo «asikwazanga ukuthumela ikhodi noma umyalezo«. kumele ngenzeni?
Kuhle i-firefox OS
Juan Francisco kusho
Ngidinga ukubuyisa ikhodi abayithumela kumakhalekhukhwini ppr okuthi i-wap loqui lm inqanyuliwe ngidinga ukuyifaka kabusha kepha angazi ukuthi ngiyibuyisa kanjani ikhodi
Phendula i-juan francisco
ismenia virginia herrera silva kusho
Sawubona, ubusuku obuhle, bengifuna ukwazi, ngine-firefox os futhi ngisebenzisa engikusebenzisayo, kepha ngifaka ama-megabyte kuyo, ngoba yanqanyulwa kakhulu futhi isesimeni esifanayo futhi bengifuna wazi ukuthi kungani.
Phendula ku-ismenia virginia herrera silva
Ngoba bangibuza ikhodi yokusebenzisa i-loqui im ​​futhi angikhumbuli iphasiwedi njengoba ngenza ngoba ngeke ngibe nayo.
Nginezinkinga ngokusebenzisa i-Loqui M. Ngukuthi lapho ngibhala umbhalo ngiwuthumela, akuveli esikrinini sami, ekuqaleni bekuwukuthumela kuphela manje futhi ukwamukelwa komyalezo. kubo bonke oxhumana nabo lapho uhlelo lukhutshazwe khona. Sengivele ngiyikhiphile ngayifaka kabusha kaningana kepha iphutha lihlala likhona. Angazi ukuthi yini umuntu anombono wokuthi angayilungisa kanjani.
lungile yulie kusho
Ngisibuyisela kanjani isicelo kumakhalekhukhwini wami? I-Acatel Firefos angikwazanga ukuyilanda futhi?
Phendula ku-leidy yulie
iphathi eliluhlaza okotshani kusho
ILoqui ingivimbile futhi manje angikwazi ukuyisebenzisa njalo uma ngifaka inombolo yami, ayingithumeli umyalezo onekhodi yokuqinisekisa, angazi ukuthi ngenzeni, ayikho indlela engivumela ukuthi ngazi ukuthi inkinga ikuphi futhi Angazi ukuthi ngingaxhumana kanjani nabahlinzeki ukuxazulula inkinga
Phendula ihholo eliluhlaza okwesibhakabhaka
Ama-WikiBooks - enzelwe ini?